HTC One, ekwentị siri ike ikpochapụ | Gam akporosis
Icheghapu HTC One bu odyssey
Alfonso de Frutos | | HTC, Mobiles
El HTC One igba egbe Ọ dịbeghị n'esemokwu. Ọ bụ ezie na ngwaọrụ a na-azọrọ na ọ bụ onye nzọpụta nke ndị na-emepụta Taiwan, nke na-ahụ ahịa ya na-ada kwa ụbọchị, malite HTC One Ọ bụ movidito.Na ihe na-anọgide na-ata ahụhụ ...
Guysmụ nwoke nọ na iFixit, ndị ọkachamara na-ejighị ekwentị ma hụ ka o siri sie ike idozi ha na-enweghị ịga SAT, gafere HTC ONE site na laabu nyocha ya na nsonaazụ ya enweghị ike ịbụ ihe na-agbawa obi: idozi HTC One dị mgbagwoju anya.
Iji malite, n'oge iFixit na-agbagha ngwaọrụ ahụ, o nwere nnukwu nsogbu ha imeghe HTC One na-enweghị mbibi ya. Tụkwasị na nke ahụ, ihuenyo ahụ siri ike ịgbanwe, ebe ọ bụ na ị ga-ekpokọta azụ niile nke ngwaọrụ iji nwee ike ịme mgbanwe ahụ. Themụ okorobịa na iFixit emekwara mkpesa dị iche iche ọla kọpa welds na nchedo N'ụzọ dị otu a, ọrụ ọrụ ọhụụ nke nnukwu ụlọ ọrụ Taiwanese nwere ezigbo akwụkwọ: 1 si 10.
Ka anyị hụ, mụ onwe m agaghị emeghe a elu-ọgwụgwụ ekwentị ma ọ bụ nri na mmanya kasị mma na obodo m. Unu niile maara nke ahụ ọ bụrụ na ị mepee ekwentị ida akwụkwọ ikike ahụ, ya mere egbula oge ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na nke a, ma ọ bụ ọnụ ahịa ọ bụla ọzọ, ana m akwado ị were ya iji rụkwaa iwu. More ma ọ bụrụ na ngwaọrụ dị n'okpuru ikike.
Ugbu a, ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na BlackBerry Z10 na-anata 8 nke 10 na iPhone 5 a 7/10 na akara izugbe, ndị Taiwanese kwesịrị ezigbo ụra na nkwojiaka maka ịhazi usoro nke ngwaọrụ ahụ nke ọma. Ma ọ bụ na ha mere ya na nzube nke mere na anyị gafere ụlọ ọrụ nrụzigharị ha?
Ozi ndị ọzọ -MWC 2013, vidiyo nke HTC One, HTC One ga-abụ igodo iji bulie ahịa nke ụlọ ọrụ ahụ, HTC kwadoro na HTC One laghachi n'izu na-abịa
Isi mmalite - iFixit
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » HTC » Icheghapu HTC One bu odyssey
Ọzọkwa, ọ na-ekwu nzọ.
Onye ọ bụla nope, "a posta" ziri ezi: n'oge gara aga, otu ịnyịnya ndị na-eguzo n'okporo ụzọ iji belata ịnyịnya ndị ọzọ gbara ọsọ na akwụkwọ ozi ka a na-akpọ posta (ya mere a na-akpọ ya post). Anyịnya ndị dị “n’elu nzipụ” adịla njikere iji ha rụọ ọrụ ma ọ bụrụ na ike gwụ ịnyịnya. N'ihi ya, ojiji nke okwu ahịrịokwu "a posta", iji gosipụta a afọ ofufo edinam, na nzube.
Bịanụ, dị ka ihe ndị a na-a HTCụ HTC na-eme iji gbochie anyị idozi ekwentị ahụ n'onwe anyị.
Obinna 23 dijo
Ọ na-esi isi nke onye na-akwado ihe nzuzu dị ọnụ ala nke Galaxy S4 mere ihe edeturu a. Mee ka o doo anya na ọ bụ ekwentị abụghị ụgbọ ala a ga-atụghasị ya oge niile, yana maka akpachapụghị anya a ga-enwe mkpuchi dị mma nke ọma, na-enwupụta ka ọ na-enwu gbaa mara mma maka ndị chọrọ ya ma ọ bụ ụdị ndị ọzọ. HTC ONE bụ anụ ọhịa ngwaike abụghị naanị ọmarịcha mma.
6 Bara Uru ngwa ọdịnala mgbe ị bụ "mgbọrọgwụ" (II Ọkara-elu larịị)
Gamestick na egwuregwu igba egbe